एमालेको ‘निर्णायक शक्ति’ देउवातिर ढल्किँदा ओली एक्लै ! - UjyaloNepal
एमालेको ‘निर्णायक शक्ति’ देउवातिर ढल्किँदा ओली एक्लै !
काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेमा सहमतिको प्रयास हुँदाहुँदै पनि सरकार गठनमा निर्णायक शक्ति बनेको नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवातिरै ढल्किएको छ ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी बैठकमा सहभागी हुन पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि नेपाल पक्ष बैठकमा सहभागी भएको छैन । आईतबार समेत च्यासलस्थित तुलसी स्मृति भवनमा चलिरहेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकमा नेपाल पक्ष सहभागी छैन ।
बरु प्रधानमन्त्री देउवाले आजै विश्वासको मत लिने भएपछि देउवालाई मत दिने छलफलमा जुटेको छ ।
ओलीले पार्टी संरचना २०७५ जेठ २ गते अगाडि फर्काउँदै आज आईतवारको बैठकमा नेपाल पक्षलाई समेत बोलाएका थिए । तर नेपाल पक्ष बैठकमा सहभागी हुने गरेको छैन ।
यसअघि शुक्रवार नेपाल समूहको उपस्थिति विना नै बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीको विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलले बुझाएको १० बुँदे सहमतिलाई अनुमोदन गरेको थियो । बैठकले साउन २५–२७ गते विधान अधिवेशन गर्ने निर्णय समेत गरिसकेको छ ।
एमालेभित्र सत्ता गठबन्धनमा निर्णायक नेपाल पक्ष खुलेरै देउवातिर लागेपछि अध्यक्ष ओली एक्लिएका छन् । सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेपछि नेता बामदेव गौतम समेत ओलीले बोलाएका बैठकमा गइरहेका छैनन् । वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समेत ओलीको विपक्षमै रहेका छन् ।
आईतबार बिहानैदेखि नेपाल पक्षका सांसदहरु विरोध खतिवडा, मेटमणि चौधरी, रामकुमारी झाँक्री लगायत १० सांसदहरूलाई होटलमा राखेर देउवाको पक्षमा विश्वासको मत दिन स्पष्ट पारिएको छ ।
होटलमा रहेका एक सांसदले भने, ‘हामी आफैंले हस्ताक्षर गरेर बनेको हुनाले १० जना सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेका छौं ।’
शनिबार साँझ सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा एमाले नेता नेपालले कम्तिमा १० सांसदहरूले विश्वासको मत दिने आश्वासन दिएका हुन् । नेपालको आश्वासनपछि प्रधानमन्त्री देउवाले आज आईतबार हतारहतारमा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् ।
स्थायी कमिटीमा रहेका सदस्य मतदानमा सहभागी नहुने र केन्द्रीय कमिटीमा रहेका र केन्द्रीय कमिटीमा नरहेका सांसदहरुले भोट हाल्ने तयारी नेपाल पक्षको छ । सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले संसद जोगाउनका लागि विश्वासको मत दिने खुला घोषणा गरिसकेकी छन् ।
जसपामा समेत महन्थ ठाकुर पक्षका ५ जना सांसद उपेन्द्र यादव पक्षमा लागेकाले देउवालाई एमालेका कम्तिमा ८ सांसदको समर्थन चाहिने देखिएको छ ।
नेपाल पक्षबाट १० सांसदले विश्वासको मत दिएमा देउवाले विश्वासको मत पाएर आगामी १७ महिनासम्म प्रधानमन्त्री हुन पाउने छन् । – मिडिया डबली
करिनाले राखिन दोस्रो छोराको यस्तो नाम ?
लुम्बिनी प्रदेशका ३ मन्त्री सांसद पदबाट बर्खास्त
२०७८ श्रावण १५ गते, शुक्रबार प्रकाशित उज्यालो नेपाल 0